अर्थ Archives - E mechi
नेपालको धनाढ्य सूचिमा परेका यी व्यक्ति हेर्नुस् कस्को सम्पती कति ?
काठमाडौँ। विश्वको हरेक स्थानमा मानिसहरु आफ्नो मेहनतको कारण निकै उच्च स्थानमा पुगेका हुन्छन् । कोही आफ्नो पौरखको कारण पुगेका हुन्छन् भने कोही पुर्खेउली सम्पत्तीको काराण आफु धनाड्य व्यक्तिको पहिचान बाउन सफल भएका छन् । संसारमा मानिसको उचाई र हैसियत नाप्ने एक कारक तत्व नै धन हो । धनले नै मानिसको पहिचान दिएको हुन्छ । जस्तै विश्वकोे धनि व्यक्तिको सूचिमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न सफल वारेन वफेट, जेफ वेजोसले आफुलाई विश्वको अग्र स्थानमा पुर्याउन सफल भएका छन् । त्यस्तै नेपालमा पनि आफुलाई धनाड्य व्यक्तिको स्थानमा पुर्याउन सफल केहि व्यक्तिहरु रहेका छन् । हेरौँ को को हुन त नेपालका धनाड्य व्यक्ति : १. ज्ञानेन्द्र शाह : २००१ देखि २००८ सम्म नेपालमा शासन चलाएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका धनाड्य व्यक्तिमा पर्न सफल भएका छन् । शाहको १७ वटा कम्पनीहरूमा शेयर रहेका छन् भने कुल सम्पति ५ करोड ८० लाख डल
७ किलो सुनसहित ट्रक चालक पक्राउ
काठमाडौं, १० बैशाख । प्रहीले ७ किलो सुनसहित ट्रक चालक पक्राउ गरेको छ । रसुवाको टिमुरेमा चीनको केरुङ नाकाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको लोडेड कन्टेनर ट्रकका चालक नवकुण्ड गाउँपालिका–१ यार्सा घर भएका शेर ग्याल्पो घले ७ किलो सुनसहित पक्राउ परेका हुन् । ना ६ ख ९०६८ नम्बरको ट्रकमा लुकाईछिपाई सुन ल्याएको अवस्थामा प्रहरीले चेकजाँच गर्ने क्रममा ७ किलो सुन फेला परेको हो । टिमुरेस्थित भन्सार कार्यालय जाँचपास गरी क्रस भएको ट्रक शंका लागि प्रहरीले पुनः चेकजाँच गर्दा ७ किलो सुन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जेट एयरलाइन्स बन्द हुँदा सोल्टी होटलको कति डुब्यो ? त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थले समेत पैसा लिन बाँकी
काठमाडौं । भारतीय वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेयज आर्थिक संकटमा परेर बन्द हुँदा यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । जेटले नेपालमा दैनिक पाँचवटा उडान गर्दै आएको थियो । जेटको उडान बन्द भएसँगै नयाँ दिल्ली तथा भारतका सहरहरु मुम्बई र कलकत्ता जाने जहाजको टिकट अत्याधिक महंगो भएको छ । जेट एयरवेयज बन्द भएपछि २२ हजार कर्मचारीको रोजगारी गयो । कर्मचारी तथा पाइलटले जेट एयरवेयजबाट तलब वापतको रकम लिन बाँकी छ । जेट बन्द भएसँगै भारतका ठूला पाँचतारे होटलहरुको समेत करौडौ रुपैयाँ फसेको छ । जेट एयवेयजलाई क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी तथा होटलहरुको पैसा फसेको छ । भारतका ठूला होटलहरु हिल्टन,ह्यात,ताज तथा म्यारियटको करोडौ रकम फसेको छ । नेपालमा जेट एयरवेयजलाई क्याटरिङ सेवा पाँच तारे होटल सोल्टीले उपलब्ध गराउदै आएको थियो । स्रोतका अनुसार सोल्टी होटलले जेट एयरवेयजलाई क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराए वापतको रकम लि
काठमाण्डौ – सुनको भाउ सोमबार तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन सोमबार तोलाको ५९ हजार ६ सय निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार तोलाको ५९ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ सोमबार तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेको हो । चाँदी पनि सोमबार तोलामा ५ रुपैयाँ बढेर ७ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । सुन लगाउने सही तरिका यो हो ज्योतिषशास्त्रअनुसार प्रत्येक धातुले हामीमाथि प्रभाव पार्छ । सौर्यमण्डलमा भएका ग्रहहरूको धातुसँग सम्बन्ध हुन्छ र ग्रहले धातुअनुसार प्रभाव पार्छ । तामा, चाँदी, सुन, हीरा लगायतका धातुबाट बनेका आभूषणले हामीलाई सिंगार्छन् पनि, काम बिर्गान पनि सक्छन् । विशेषगरी सुनको महत्त्व धार्मिक तथा शृंगारिक प्रयोगमा बढी नै हुन्छ । जीवन सजाउन चाहनुहन्छ भन्ने सुन लगाउने र राख्ने सही विधि पनि जानिराख्नुपर्छ । देब्रे हातमा सुन नलगाउनुस् । यसले गर
सौराहामा सफारीको शुल्क निर्धारण
बैशाख ९, २०७६ चितवन : चितवनको प्रमुख पर्यटकीयस्थल सौराहामा रहेका जिप सफारी, हात्ती सफारी र टाँगा सफारीलाई व्यवस्थित गर्न शुल्क निर्धारण गरिएको छ। पर्यटकको सहजताका लागि र मनलाग्दी शुल्क नियन्त्रणका गर्न शुल्क निर्धारण गरिएको हो। रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन (रेवान) सौराहाको अगुवाइमा व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाको भेलाले जिप सफारीको शुल्क निर्धारण गरेको छ। हात्ती र टाँगा सफारीको शुल्क यसअघि नै तोकिएको थियो। यस्तो छ शुल्क रेवानका अध्यक्ष गोकर्ण गिरीका अनुसार जिप सफारीका लागि प्रतिव्यक्ति ८०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। सौराहा जाने पर्यटकलाई जिप सफारीमार्फत कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन र बीसहजारी ताल घुमाउने गरिन्छ। दुई घण्टा लाग्ने यी दुई पर्यटकीय स्थानमा जिप रिजर्भका लागि ६ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि शुल्कमा एकरुपता नहुँदा आफु खुसी शुल्क लिने ग
यी व्यक्ति जसले २ दिनमा सेयर बजारबाट कमाए १ खर्ब रुपैयाँ
नयाँ दिल्ली । एवेन्यु सुपरमार्केट्स कम्पनीका मालिक राधाकृष्ण दमानीलाई राम्रोभन्दा पनि धेरै राम्रो भएको छ । २१ मार्चमा दमानीको कम्पनी चर्चामा आएको थियो । आई थ्री जब लिस्टिङ को पहिलो दिन कम्पनीले सबैभन्दा बढी नाफा गरेको छ । लिस्टिङपछि कम्पनीले सेयर मुल्य २.५ गुणाले बढेको छ । कम्पनीको स्टक शुक्रवार सम्म २ सेसनमा १९ प्रतिशत बढीसकेको छ । जसबाट दमानीको सम्पत्ती ६१ अर्ब रुपैयाँ भारुले बढेको छ । यो रकम करिब १ खर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन्छ । मुम्बई स्टक एक्सचेन्जमा शुक्रवार उनको कम्पनी ७ सय ५० भारुमा बन्द भएको छ । बुधवार कम्पनीको सेयर मुल्य कारोबार बन्द हुँदा ६ सय ३१ भारतीय रुर्पयाँ थियो । जुन शुक्रवारसम्म १८.८२ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको सेयर लिस्टिङ को दिन इशु प्राइज मुल्य २ सय ९९ रुपैयाँ थियो । दमानीको श्रीमती र उनको भाईको कम्पनीमा ८२.२ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको छ । ब्लूमर्ग बिलेनियर इ
१६५ केजीको बोका हेर्न घुइँचो
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका ११ डिभर्ना धारामाथिनिवासी गीता भुसालको घरमा दुईवटा मात्र माउ बाख्रा छन्। तिनका पाठापाठी बेचेर वार्षिक तीन लाख आम्दानी गर्न उनी सफल भएकी छन्।दुई वर्षको अवधिमा दुई मात्र बाख्रा पालेकी भुसालले बोका र पाठी बिक्रीबाटै पौने चार लाख कमाउन सफल भएकी हुन्। अहिले झन्डै २ लाखका पाठापाठी बिक्रीका लागि तयार छन्। यो आम्दानी अन्य व्यवसायबाट प्राप्त गर्न कठिन परि श्रम गर्नुपर्छ। ‘धेरैवटा पाल्नु पनि पर्दैन रहेछ, दुःख पनि छैन दुईटाको स्याहार गर्न’, उनले भनिन्, ‘यिनैबाट पौने चार लाख कमाएँ। पाठापाठी तयार छन्। अब २÷४ दिनमै बेच्नेछु। भुसाल मात्र हैन, डिभर्नाका कृषकले बोयर जातका बोकाको बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन्।डिभर्ना यतिबेला बोयर जातका बाख्रा उत्पादनको स्थल बनेको छ। मासुजन्य उत्पादकत्व सुधार तथा बोयर वर्णशंकर उत्पादन का र्यक्रमअन्तर्गत जालकाँडा बाख्रापालन समूह
Posted in अर्थ, राष्ट्रिय समाचार
काठमाडौं । हिमाल र पहाडबाट बगिरहेको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी बिक्री गर्ने योजना बनाउँदै खानेपानी मन्त्रालयले शुक्रबार बृहत अन्तरक्रिया गरेको छ । नेपालको अन्य देशहरुसँग बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने र नेपालको पहिचान विश्व बजारमा फैलाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले हिमालबाट बगेर आएको ग्लेसियर र स्प्रिङ वाटर निर्यात गर्ने विषयमा बृहत छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री विना मगरले सन् २०३० सम्ममा सबै नेपालीलाई शत प्रतिशत प्रशोधनसहितको खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने र खेर गैरहेको पानीलाई प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्ने योजना बनिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री मगरले विश्व बजारमा नेपालको ग्लेसियर र स्प्रिङ वाटरलाई निर्यात गर्ने सम्भावनाको खोजी भैरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सबै नेपाली नागरिकलाई आधारभूत खानेपा
Apr182019 by emechiNo Comments
टुटललाई कर साढे ३ करोड
काठमाडौं । ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो । ‘तीन आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), संस्थागत आयकर र राइडरलाई दिने रकमको अग्रिम करकट्टी शीर्षकमा कर निर्धारण गरिएको हो,’ राजस्व स्रोतले भन्यो, ‘सबैभन्दा बढी भ्याट शीर्षकमा कर निर्धारण भएको छ ।’ दोस्रो बढी कर राइडरलाई भुक्तानी हुने रकमको अग्रिम करकट्टीको १५ प्रतिशत हो । समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
घर भाडामा बसेको मान्छेलाई भाडाबाट निकाल्दा घरधनीले तिरे ४ लाख क्षतिपूर्ति…
हेटौंडा : घर भाडामा बसेका व्यवसायीलाई निकाल्दा हेटौंडाका एक घरधनीले क्षतिपूर्ति तिरेका छन्। हेटौंडा–४ का घरधनी प्रभु शाहले आफ्नो घरमा भाडा लिएर बसिरहेका व्यवसायीलाई निकाल्दा क्षतिपूर्ति तिर्नु परेको हो।घरबाहाल संघ मक वानपुरले विनाकारण भाडामा लिएर व्यवसायी गरिरहेका अनिल अर्याललाई निकालेपछि शाहविरुद्ध आन्दोलन गरेर क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पारेको हो। संघ मकवानपुर अध्यक्ष नवराज न्यौपानेका अनुसार हेटौंडा–४ मा रेबलोन कस्मेटिक्स एण्ड गिफ्ट सेन्टर सञ्चालन गरि रहेका अनिल अर्याललाई घरधनी शाहले विनाकारण घर मर्मत गर्ने भनेर निकालेका थिए। ‘घर मर्मत सकिएपछि अर्को व्यक्तिसँग अग्रिम पैसा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि हामी व्यवसायी एक भएर शाहविरुद्ध आन्दोलन गरेका थियौँ। संघको अगुवाइमा तालाबन्दी भएपश्चात् घरधनीले बाध्य भएर सहमतिमा चार लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए’ , अध्यक्ष न्यौपोनले भने।